१ लाख शिशु जन्मँदा २ सय ३९ सुत्केरीको मृत्यु ! « प्रशासन
१ लाख शिशु जन्मँदा २ सय ३९ सुत्केरीको मृत्यु !
काठमाडौं । सुत्केरीले अकालमा ज्यान गुमाउने अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुरस्कृत भए पनि मातृमृत्युदर न्यूनीकरण अभियानले चार वर्षयता अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकेको छैन । चार वर्षअघि मातृमृत्युदर घटाउने अभियान प्रसंशनीय ढंगले अघि बढेको थियो । त्यसपछि अभियान अपेक्षाकृत सफल नभएकोमा स्वास्थ्य अधिकारी नै असन्तुष्ट छन् ।
बाल विवाहका कारण किशोरी आमा बन्नु पर्ने बाध्यता र दुर्गम भेगमा शल्यक्रिया सहितको प्रसूति सेवा दिनुपर्ने डा.पोखरेल बताउँछन् । सुरक्षित मातृत्व सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले ८ हजार ७ सय हाराहारी दक्ष प्रसूतिकर्मी उत्पादन गरेको छ । सरकारले देशभर २ हजार बर्थिङ सेन्टरसमेत स्थापना गरिएको छ । ७२ जिल्लामा शल्यक्रिया सहितको प्रसूति सेवा विस्तार गरिसकेको छ ।
प्रसवपश्चात रक्तस्राव रोकथामका लागि मातृ सुरक्षा चक्की वितरण, आर्थिक अभावमा प्रसूति सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्था गरिएको छ । दुर्गम भेगबाट प्रसूति व्यथा जटिल भएपछि १९ जना आमालाई हवाईजहाजबाट निःशुल्क ल्याई ठूला अस्पतालमा उपचार गरिएको छ । संविधानको धारा ३८ (२)ले प्रत्येक महिलाको सुरक्षित मातृत्व अधिकारलाई मौलिक हकमा सुनिश्चित गरेको छ ।
बहुक्षेत्रीय सहकार्य र प्रतिबद्धता भए मातृमृत्युदर न्यूनीकरण गर्न सकिने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । परिवार स्वास्थ्य महाशाखा निर्देशक डा. पोखरेल भन्छन्, ‘सुरक्षित मातृत्वको अधिकार स्थापित गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र एक्लैको प्रयासले मात्र सम्भव छैन ।’ आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।